Amazon hadda waxay bixisaa cirifka iftiinka LED light for 8 $ - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Amazon hadda waxay bixisaa cirifka cad ee iftiinka LED for 8 $ - BGR
Amazon hadda waxay bixisaa cirifka cad ee iftiinka LED for 8 $ - BGR
Haddii aad rabto in aad abuurto saameyn nalalka aad u weyn oo gurigaaga ah oo aadan rabin inaad bedesho midab, waxaa hadda jira qandaraas ku saabsan Amazon in aad si dhab ah u hubiso. Ganacsatada ugu wanaagsan ee dalka ku yaala ayaa leh HitLights Cagaaran Cagaaran Bariiska Nalalka Barta laga heli karaa qiimaha 7,99 $ US kasta, taas oo ah dalab fantastik ah. Qayb kasta waxay cabbirtaa cagaha 16,4 dheer waxayna ka kooban tahay nalalka 300 LED. Waxaad u jajabin kartaa dhererka aad rabto oo dhabarkuna wuxuu leeyahay macmacaan kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku dhajiso meel kasta. Ku xir fareebka Wi-Fi sida akoonka Tilmaamahan 10 Dollar iyo xitaa xitaa xakameyn kartaa nalalkaaga Alexa ama Google Assistant!
NASUULKA IYO DIYAARINTA ISTICMAALKA Istaraatiijiga iftiin yar ee istiraatiijiga ah ee loogu talagalay isticmaalka ganacsiga iyo degaanka - qolalka fadhiga, dukaamada nalalka iyo waxyaabo kale oo badan! Dhulku wuxuu leeyahay dherer 16,4.
MACLUUMA IYO XIRIIRKA - Ku xiran HitLights 8mm fidiyaha xirmooyinka iyo accessories. Isku xirxirid fudud - la jarjar laba maqlood labadii diyaara.
DIMMABLE iyo FLEXIBLE, qalabkan LED waxay ku haboon yihiin noocyo kala duwan oo gudaha iyo gudaha ah, oo ay ku jiraan nalalka kabadhada ee jikada, qalabka nalalka iftiinka qolalka hurdada, iftiinka tooska ah musqulaha ama iftiin dheeraad ah. on shelves, roogaga buugga ama warshadaha shiinaha.
Ka fikir qalab adag - Miisinkeena si dhakhso ah oo si sahlan loo rakibo, oo aan khibrad u lahayn qalabaynta ama korontada, sannado badanna leh shuruudaha tamarta.  TAYADA HESHIISKA Waxaa ku soo laabtay hal sano oo ah damaanad ah HitLights oo loogu talagalay nabadgelyada maanka. La xidhiidh kooxda adeegga macaamiisha ee US-ka ah wakhti kasta oo ku saabsan xalinta dhibaatooyinka iyo beddelka fudud, ama haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan iibsashada ama rakibidda.
waxaan ka helnaa webka.
Si aad u ogaato waxyaabo badan oo ku saabsan dalabyada martigelinta ah iyo fursadaha fariinta noocan ah, fadlan u soo dir email sponsorisé@bgr.com
Waxyaabaha ku jira BGR Deals waxay ka madaxbannaan Tifaftirka iyo Xayeysiinta, BGR waxay heli kartaa guddi iibsasho ah oo ay sameeyaan boosteejooyinkeena.
Ma jirto qaab u fududeeyaha siriyeyaasha degdegga ah ee iibka on Amazon ee kaliya 7,64 $ - BGR
Amazon Shirkadda Premium 4K Action Camera ee Sale for 50 $ - BGR
Poupy de pakgne oo labbisto Hindiya ❤❤❤❤ - HERE'S VIDEO
Dhexdhexaad noo dhexeeya: Maxay tahay sababta doorashada Lion The Lion?